Repoblika Centrafrique: Tahaka ny Ahoana ny Tanjak’ilay Dinam-Pandriampahalemana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2013 14:14 GMT
Mpioko ao avaratry ny Repoblikan'i Afrika Afovoany avy amin'i hdptcar hita Flickr (CC BY-SA 2.0)
Nanasonia dinam-pandriampahalemana vaovao tamin'ny 11 Janoary 2013 ny Repoblika Afrika Afovoany (CAR), tarihin'ny filoha François Bozizé sy ny mandatehezan'ny mpioko Séléka. Vita izao fifanarahana izao taorian'ny iray volan'ny fikorontanana ara-miaramila [mg] sy ara-politika nahitana ny fandrosoan'ny mpioko mizotra mankany an-drenivohitra Bangui ao anatin'ny fikasana hanongana an'i Bozizé nandritra izany fandrosoana ara-tafika izany. Heverina hamoaka ny anaran'ny praiminisitra vaovao sy ny fananganana ny governemantan'ny firaisam-pirenena ity dinam-pandriampahalemana ity. Araka ny voalazan'ny Centrafrique Presse Info, dia antenaina hitazona ny teniny amin'ny fanendrena an'i Nicolas Tiangaye, [fr] mpisolovava sy filoha teo aloha tao amin'ny Ligin'ny Zon'Olombelona Afrikana Afovoany, ho praiminisitra vaovaon'ny firenena ny filoha Bozizé.
Iza no mpanohana ny Séléka
Na dia eo aza ny ezaky ny mpioko hifehy faritra midadasika ao amin'ny Repoblika Afrika afovoany, dia zavatra kely ihany no fantatra momba ny Séléka sy ireo mpiara-dia aminy. Manao izao fanontaniana manaraka izao, ohatra, ny L’Observateur [fr]:
Fa iza ity fikomiana ity? Avy aiza? Avy aiza ny volany? Maro ny fanontaniana fa tsy mora ny valiny.
Ho an'ny mpanadihady sasany, tahaka an-dry Thierry Vircoulon, mpikaroka ao amin'ny International Crisis Group (ICG), angamba mahazo fampitaovana goavana sy fanohanana politika avy ao Tchad ny mpiokoa Afrikana Tafovoany. (…)
Io firenena io no mpiaro an'i Centrafrique am-polony taona izay. Niteraka fiahiahiana indrindra ny famotsoran'i N’Djamena tao anatin'ny volana vitsivitsy ny mpanohitra maro avy ao amin'ny Séléka. Tahaka izany ihany koa ny tsy nihetsehan'ny tafika mpanelanelana tshadiana nalefa ho any Sibut, hidin-dalana eo amin'ny zato kilometatra eo ho eo miala an'i Bangui
Nisy telegrama avy amin'ny masoivohon'i Etazonia ao Bangui navoakan'ny Wikileaks tamin'ny 2009 manamafy ny fidiran'i Tchad amin'ny fanohanana ny mpioko. Saingy mandà hatrany ny fanohanan'ny hery vahiny ny Séléka, izay mbola nohamafisin-dry zareo indray [fr] tamin'ny voalhoany Janoary. Tsy nanakana ny filoha Bozizé hiampanga ny mandatehezana ho baikoan'ny mpandray anjara avy any ivelany izany.
Nahatonga ny firenena Afrikana vitsivitsy hanohana ny MICOPAX [fr], bemidin'ny mpampandry tany tarihin'ny Fikambanana ara-toe-karen'ny Firenena ao Afrika Afovoany ao Centrafrique, amin'ny fandefasana tafika any an-toerana ny fiverenan'ny herisetra indray. Tamin'ny 6 Janoary no nanambara i Afrika Atsimo fa handefa miaramila 400 any Centrafrique ihany koa, fanapaha-kevitra notsikerain'ny [fr] mpanohitra ao amin'ny firenena. Mitaratra ny efa nandefasan'i Afrika Atsimo miaramila tany Centrafrique teo amin'ny tantara anefa izany fanapaha-kevitr'i Pretoria izany. Tamin'ny 2006, ohatra, navoakan'ny Masoivohon'i Etazonia tany Pretoria fa nanaiky ny hanampy sy hampiofana ara-tafika any Centrafrique i Afrika Atsimo satria zava-dehibe ho amin'ny tombontsoam-pirenena ao ny fisian'ny filaminana.
Ary ao amin'ny tsanga-kevitra iray [fr] nivoaka tao amin'ny Le Plus Nouvel Obs, Florence Gabay, Filoha lefitry ny Ivotoerana Robert Schuman ao Eoropa, manolo-kevitra fa fiolahana eo amin'ny famahana krizy any amin'iny faritr'i Afrika iny ny fanetsiketsehana tahaka izao:
Mahaliana ny manamarika fa hery ara-toe-karena ny hery mpampandry fahalemana eto, ny Fikambanana ara-toe-karenan'ny Firenena Afovoan'i Afrika. Zava-misy manana dikany lehibe izany: Efa nanana ny lazany ny famelabelarana nataon'i Benjamin Constant fa misolo toerana tsikelikely ny fifanandrinana amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana ny varotra. Ahitana marika mazava amin'izany i Afrika: Atao amin'ny anaran'ny hevitra sy fenitra tratrarina ny Fandriampahalemana, saingy na dia tsara aza izany, dia tanterahina noho ny tombontsoa ara-toe-karena ilay izy
Fototra matanjaka hampaharitra ny fandriampahalemana?
Raha mbola misalasala amin'ny fahafahan'ity fifanarahana ity mitondra fandriampahalemana maharitra ao Centrafrique ny mpanara-maso sasantsasany. Ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Survie, izay mpitsikera ny ‘rafitra Françafrique’ kosa namoaka lahatsoratra milaza fa ‘marary tanteraka’ [fr] ny repoblikan'i Afrika Afovoany. Nilaza ny mpanoratra, Raphaël de Benito, fa efa feno ny fepetra isian'ny krizy manaraka:
Tsy nahafaly na iza na iza ny fifanarahana nivoaka avy tao: mamarana ny fe-potoana iasany hatramin'ny farany amin'ny 2016 i Bozizé, ametrahana praiminisitra avy amin'ny mpanohitra sivily raha mody maina ka nahasorena ny mpitarika ara-miaramila ao aminy kosa ny Séléka izay mifehy ny ampahany be amin'ny firenena.
Vatsian'ny International Security Network (ISN) ity lahatsoratra (teny anglisy) ity sy ny dikantsorany amin'ny teny frantsay, arabo ary espaniola ho fiaraha-miasa amoahana ny feon'olo-tsotra eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny filaminana ankapobeny. Tao amin’ny bilaogy ISN no navoaka voalohany ny lahatsoratra ary azonao jerena eto ireo tantara hafa mifandraika amin’izany.